Jun 27, 2020 - 28 Aragtiyood
Waxay sheegeen in Maqaamka Caasimadda ee ku Qoran dastuurka uu dhigayo in Labada Aqal ay go’aan soo saarayaan, Balse aysan Xaq u lahayn Xildhibaanada golaha shacabka.
“Waxaa hada muuqata Caasimad Soomaaliyeed , oo hadana u eg magaalo Reer leeyahay, markaad eegto sida loo beegsaday dadka Arintaasi ka hadlay , Waana sharci darro go’aanka ay qaadeen Golaha shacabku“ Ayuu yidhi xildhibaan ka hadlay.
“Tirada Aqalka sare waxaa sheegaya Dastuurka, sidoo kalana Golaha shacabku Awood uma laha inay Furaan dastuurka, waa arimo uga sii daraya Dawladnimadii Soomaaliya ee Dedaalka badan lasoo geliyey.”
Xildhibaanada Puntland ayaa sheegay inay Arintan ka dambeeyaan Siyaasiyiin doonaya inay Hab Qabiil Cod uga raadsadaan Shacabka Caasimadda, Sidoo kalana waxay dhaliileen Hanjabaada loo diray Xildhibaano kasoo jeeda deegaanada Puntland.
Viva Banaadir State 💪💪💪
HORTA Xaangow ina Abti (luuqad qabyaaladaysan baan kugula hadli Maadama aadan MID kale aqoon).≈©≈Adeer wax lala yaabo ma aha HADDAAD Ruux u qaadato inuu kaa Caqli yaryahay LAAKIN waxaa nacasnimo ah INAAD tiraah 16toban beelood kuma jiro ruux kaliya oo garasho igu gaara Sababta oo ah anigu waxaan u dhashay reer LEBI”. ≈©≈HORTA saaxiibow WAXAAN kugula talina Haddaadan weli guursan INAAD xero MJ guur ka raadsan “Mid QADARKU qasbo mooye” sababta oo ah Marka hore Cudurrada layska dhaxlo ayyaan ubadkaaga u gudbayn Marka labaad Fikirka Aad Qabyaaladda ka qabtaa isbedeli Midda saddexaad Waxaad heli Xannaano saaìda OO gabadha isdhihi “Yaan Sayyid kaaga iyo Gurigaaga Wax laga sheegin oon la dhihin; “Waa tii xumayd oo reer hebel. Waa noo markale WBT